Ikpocha ikuku na ọrụ nsị Disinfection na ụlọ ọrụ | Ikuku
Molekụla na-agbasa teknụzụ ikuku disinfection type purerisation rate is to 99.9%. Airkwụ elinye Ọcha Dị Ọcha (CADR): 480m3 / h, kwesịrị ekwesị maka mpaghara 40-60m2. Na-arụ ọrụ nke ọma wepụ isi ma sachapụ PM2.5, haze, pollen, ájá, VOCs. Achọpụtala ihe nzacha nke ikuku na ụlọ ọrụ nchọpụta microbiology. Ọnụ ọgụgụ igbu egbu maka nje H1N1 na nje H3N2 bụ ihe dịka 99.9%.
Molekụla Na-agbasa Teknụzụ
Ọ Bụghị Ikpocha Ikuku Niile Nwere Ọrụ Disinfection
Gbuo nje na nje
Disinfection ọnụego> 99%
Decompos organic anwụrụ ọkụ
Ọ nwere ike ire nicotine (emepụtara) site na sịga) na degrade organic anwụrụ ọkụ Ihe mmetọ.
Cragbawa bekee dị ka benzene na usoro benzene, gas na-emerụ ahụ na-enwe mmasị na formaldehyde na aldehyde ketone sitere n'ụlọ ịchọ mma n’enweghị mmetọ ọzọ.
Mgbe ikuku rụrụ arụ na-abanye n'ime ihe dị ọcha nke ihe nhicha ahụ, ion ion ndị na-arụsi ọrụ ike nke sitere na ngwongwo ike dị ike na isi ihe na-emetụta ngwongwo nke ihe ndị na-emetọ emetọ, na-eme ka agbụ CC na CH nke mejupụtara agbụ nke ọtụtụ microorganisms na-emerụ ahụ. na gas na-agbaji, n'ihi ya, a na-egbu nje ndị na-emerụ ahụ ka DNA ha na-ebibi ma gas ndị na-emerụ ahụ dị ka Formaldehyde (HCHO) na Benzene (C6H6) na-agbaba n'ime CO2 na H2O.
Ọrụ kacha mma
Diniksis na nhicha dị ọcha na-eweta arụmọrụ dị elu na-aga n'ihu na-egbu nje na nje, na-akụda gas na-emebi ma na-ere anwụrụ ọkụ.
Enweghị ihe mmetọ nke abụọ na-egbochi obere nchekasị na nchebe ka mma.
Obere iguzogide, mmezi dị ala, mkpofu ala, oriri ike.
Nke gara aga: Fresh Ikuku Disinfection Box maka HVAC System
Osote: Industrial Jikọtara Air Ijikwa Units
Ngwunyecha ikuku kacha mma
Azụmahịa Ikuku Ugbo
Dum House Air dị ọcha
Otu Bzọ Ikuku Ikuku Fresh Air Filtration Systems
Fresh Ikuku Disinfection Box maka HVAC System